राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौ : योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेल | ईमाउण्टेन समाचार
राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौ : योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. पौडेल
भदौ ८, २०७८ पढ्न ४ मिनेट
काठमाडाैं । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजाने सवालमा अकल्पनिय काम गर्न सक्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सवालमा पनि ससक्त राजनीतिक संयन्त्र र प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको बताए ।
समाज परिर्वतन गर्न सक्ने राजनितिक शक्तिलाई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्र्दभमा पनि शक्तिको रुपमा पनि प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औल्याए । त्यसका लागि राजनैैतिक नेतृत्वबीच साझा समझदारी र प्रतिवद्धता दुवै आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।
उनले भने “राजनीतिक नेतृत्व भनेको ठूलो शक्ति जम्मा गर्ने पाखुरा हो । त्यसले श्रृजनात्मक वा विध्वम्सात्मक दुवै काम गर्न सक्छ । राजनीति प्रयोग गरेर हामी राज्य बनाउँछौ । राज्य प्रयोग गरेर शक्ति जम्मा गर्छौ । शक्तिले श्रृजनात्मक वा विध्वंम्सात्मक जे भने पनि अकल्पनिय काम गर्न सक्छौ ।”
विभिन्न तहमा रहेका असमानताहरुलाई राज्यले चिरफार गरेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले गाउ र शहर बीचको असमानता हटाउने विषयमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबीच बुझाईमा स्पष्टता नभएकाले त्यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।
जोखिमपुर्ण वस्तीको स्थानान्तरण र दिगोपना लगायतबारे पनि राजनीतिक तहमा साझा बुझाई र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताए । न्यायमा सबैको पहुँच पुराउने विषयमा सरकारले पर्याप्त काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गरे । न्याय लागत, त्यसको प्रक्रिया र पहुँचले पनि दीर्घकालिन विकासमा निकै ठूलो प्रभाव पार्ने तर्क उनले गरे ।
उनले भने “ लक्ष्यमा संगत हुने गरेर पक्ष लिने कि लक्ष्यमा संगत नहुने गरि पक्ष लिने ? यी कुराहरु न्यायमा जोडिन्छ । सरकारले पैसा गर्न सक्छ तर फेरी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्व नै खाँचो पर्छ । मान्छेको शक्ति भनेको कलेक्टिभलि काम गर्न सक्ने क्षमतामा आधारित भएको हुनाले राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको भूमिका छ ।”
देश/समाज‐मा वर्गिकृतdr bishwo nath paudel
पूर्वको लाईफ मानिने मोरङको ६ लेन सडक निर्माणको काम सन्तोषजनक भएन (भिडियाेसहित)
‘तपाईंको मास्क खोई ?’ कार्यक्रम अन्तर्गत १५ हजार ४९ जनालाई निस्शुल्क मास्क वितरण
सरकार दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रतिबद्ध
सरकारले दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र तयार
दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारद्वारा मार्गचित्र तयार
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सबै तहका सरकारको संयुक्त प्रयास आवश्यक : उपाध्यक्ष कँडेल
सिंहदरबार भित्र ‘दिगो विकास स्रोत केन्द्र’ को स्थापना